Wararka - Healthplex Expo 2020 waxaa la qabtaa Nofeembar 25th, 2020
Healthplex Expo 2020 waxay si guul leh uga soo ururisay dhammaan noocyada ugu waaweyn ee caafimaadka iyo nafaqada meelo kala duwan oo adduunka ah. Waxaa lagu qabtay Xarunta Shirarka Qaranka iyo Carwada (Shanghai) laga bilaabo Noofambar 25th ilaa 27th ee 2020 illaa 3 maalmood. Bandhigga, oo ay weheliso bandhigyo taxane ah oo ku saabsan alaabada ceyriinka caafimaadka, maaddooyinka cuntada, makiinadaha wax soo saarka iyo baakadaha, warshadaha istaarijka, ayaa sameyn doona shirar badan oo isku xiran oo iskaashi ka wada warshadaha Shiinaha oo isku xiraya dhammaan isku xirnaanta silsiladda warshadaha oo dhan, oo ay ku jiraan aasaasiga beeraha ka baaraandegidda, maaddooyinka cuntada, ka shaqeynta cuntada, baakadaha, nafaqada iyo alaabada daryeelka caafimaadka, isla markaana si wada jir ah u abuuraya 170000 mitir murabac oo silsilad warshad cunto ah oo hal-joogsi ganacsi ah si loo soo jiito macaamiisha In ka badan 100000 Shiinaha iyo ajaanib ah oo wax iibsada oo is urursaday.
Badeecad aad u fiican iyo qiimo - aag dibedda laga doorbido
Sanadka 2020, bandhiggu wuxuu kulmin doonaa carwooyinka dibadda ku nool in ka badan 20 waddan iyo gobollo ay ka mid yihiin Japan, Canada, New Zealand, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Italy, India, Britain iyo Greece.
Ku guuleysato hanashada adoo adeegsanaya daraasad dhammaystiran oo ku saabsan maaddada
Seminaaro dhammaad sare oo diiradda saaraya wejiga hore ee warshadaha, kulan wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo loogu talagalay iibsadayaasha xirfadlayaasha ah, kulanka isdhaafsiga farsamada is dhexgalka ah, suuqa qaranka iyo kulanka tarjumaadda siyaasadda ee khubaro awood leh, muxaadarooyin caafimaad oo khubaro caan ah oo TCM ah oo faafinaysa fikradaha caafimaadka ee saxda ah. , iwm. waxqabadyo isku mid ah oo hodan ah ayaa u gudbin doona macluumaadka warshadaha cusub iyo dhammaystiran warshadaha iyo dhammaan qaybaha nolosha.
Waxay ka kooban tahay wax kasta oo ka soo baxa cuntada iyo baakadaha ilaa cuntada iyo waxyaabaha dabiiciga ah. Tani waa bandhig ganacsi oo gaar ah oo isku xiri doona silsiladda cuntada caafimaadka. Munaasabadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey rugta ganacsiga Shiinaha ee soo dejinta iyo dhoofinta daawooyinka iyo wax soo saarka caafimaadka, TDB ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Suuqyada Informa.
Xiamen Gelken waa soo saare gelatin iyo kolajiin leh khibrad 20 sano ka badan. Waxaa naga go’an in aan siino gelatin tayo sare leh suuqa adduunka. Wixii loogu talagalay 2020, waxaan ku biiri doonnaa Healthplex EXpo 2020 oo waxaan la yeelan doonnaa xoogaa xiriir ah shirkad kale oo xirfadlayaal cunto caafimaad leh Waabkeennu waa 81H55.